Hevitra MPANOHARIANA | Jiona 2011
Ilay Asabotsy ifankahitana
2011-06-10 @ 21:53 in Politika
Dia eo amin'ny fotoana iandrasana ny fanapahan-kevitra avy amin'ny SADC amin'izay isika rehetra. Eo am-pelantanan'ny vahiny ny ho avin'i Madagasikara ara-politika amin'ity andro Asabotsy 11 jona 2011 ity. Raha kepoka teo am-pihainoana ny fanambarana nivoaka avy amin'ny Parlemanta Eoropeana ny mpanohana ny FAT noho ny famelezana an-kitsirano ny Filohany sy ny mpanaraka azy dia nampahery tena avy eo. Nivoaka amin'izay ny fanambarana fa angady mondry tsy mahatapak'ahitra izany Antenimiera Eoropeana izany fa ny fitambaran'ny Filoham-pirenena Eoropeana ihany ihany no tena mikaonty.
Nanambara ihany koa ny Masoivoho Frantsay, nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena Rosiana, tetsy Ivandry, fa ny fanapahan-kevitra avy amin'ny SADC ihany no tena misy heriny. Azo heverina ho karazany nikoropaka ihany ity ranamana ity. Samy miditra an-tsehatra amin'ny raharaha Madagasikara moa izany na ny Antenimiera Eoropeana na ny Ambasadera Frantsay, ary ny tsy azo adinoina dia ny SADC. Efa navoakako teto fa tsinjo nirona tsikelikely hanaiky ny tondrozotra "novolavolain'ny dokotera Simao" ity fikambanam-paritra ity ka karazana tsindry ihany ilay fanambarana avy amin'ny Parlemanta Eoropeana raha hahasahy hanaiky ny fitondran'ny mpanongam-panjakana sy ny fikarakarany fifidianana ihany ny fitambaran'ny Filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana ao amin'ny SADC na tsia.
Fanontaniana hafa mandritra izany ihany koa ny hoe hiasa mafy ve ny fampitam-baovao tahaka ny AFP, RFI, Reuters, AP? Hiasa ho amin'ny lainga sa hiasa manakory. Mila mitandrina hatrany amin'izay vaovao hipoitra rahampitso ny rehetra. Jerena tsara ny loharanom-baovao. Tadiavina ny antontan-taratasy loharano. Raha ny mety aza dia miandry ny andro alahady na alatsinainy mihitsy aza raha mbola tsy hita imaso ny fanambarana ofisialy. Manaraka izany dia tsara ihany koa raha asiana rano mangatsiaka eo am-piandrasana ny vaovao ary tsy hipetra-drery na hitoka-monina fandrao tsy misy mahita ny fahavoazana raha sanatria...
Jentilisa 10 janoary 23:55